Oovimba be-oyile-Funda ukurhweba
I-Genel Energy ilindele ukuHamba kweMali yasimahla ukuba iDlulwe ngokuphindwe kabini ngo-2022
I-Bhritane ye-Genel Energy iqikelele izolo ukuba ukuhamba kwemali ngokukhululekileyo kuya kudlula kabini kwinto ebikade iyiyo kulo nyaka, incediswa kukunyuka kwexabiso le-oyile yehlabathi, kunye nomvelisi we-oyile ogxininiswe e-Iraqi Kurdistan elindele ukuphuma kwinqanaba elingatshintshiyo ukusukela ngo-2021.
Ishishini liye labandakanyeka kwingxabano encinci kunye norhulumente wesithili saseKurdistan (KRG) wase-Iraq, kwaye ukusukela ngoDisemba waqala ukwenza izigwebo ngokuchasene nabo eLondon malunga neenyani ezifuna ukuphelisa izivumelwano ezimbini zeeprojekthi zegesi ezabiweyo kulo mmandla.
Genel, uye wazuza ekufumaneni ixabiso leoli, emva kokuwa ngeentsuku zokuqala ze-COVID-19 xa izibonelelo zaba ngaphezulu kunokufuneka.
I-Genel ibonise ukuba ilindele ukuhamba kwemali ngokukhululekile; ukuya kuthi ga kwi-200 yezigidi zeerandi, kungadlulanga intlawulo yezahlulo, kwi-75 yeedola ngomphanda wexabiso leoli ye-Brent, inyusa izabelo ze-2.1% ukuya kwi-145 pence nge-0835 GMT.
Inkampani ebhengeze umndilili wokwenziwa kweebhari zeoyile ezingama-31,710 ngosuku ngo-2021, ilumkise ukuba ukonyuswa okanye ukuhla kwe-10 yeedola ngomphanda ngexabiso le-Brent kuya kufikelela kwintshukumo yayo yonyaka ngezigidi ezingama-50 zeedola.
Ukuthengwa kwe-oyile kakhulu, okubangelwa kukungabikho konikezelo kunye neempawu ezahlukeneyo ze-COVID i-Omicron ayizukuphazamisa isicelo sesibaso njengoko kusoyikwa, iqhube amabakala akrwada ambalwa ukuya kwiminyaka emininzi ephezulu, ebonisa ukonyuka kwexabiso.
tags imali, iindaba, ioyile
Uluhlu lweNtengiso luqhubeka ngamehlo kwiGolide, ioyile kunye neNtetho yePowell yeFED
Ukuhlaziywa: 26 Agasti 2020
Iimarike ze-Forex namhlanje ziyaqhubeka nokuhlala kuluhlu olunqabileyo, ngoyaba iintshukumo ezomeleleyo kwiimarike zesitokhwe. I-Yen iphantsi ngokubanzi, kodwa akukho zimpawu zokuphuma ukuza kuthi ga ngoku. Ngokunjalo, idola nayo izama ukufumana umkhombandlela ocacileyo, ishiye eyesibini ibuthathaka kwiveki emva kweYen. Idola yase-Australia okwangoku yomelele ngakumbi kuneponti entle. Iimakethi zisenokufuna ukukhuthazwa ngokwenyani nguSihlalo weFed uJerome Powell ekupheleni kweveki ukuthatha inyathelo elilandelayo.
Ngokobuchwephesha, igolide kunye neoyile ekrwada inokuba kwindawo ebonakalayo namhlanje. Igolide iye yalahlwa yindawo yokumelana neyure ezi-4 kwangethuba, eqinisekisa ukwehla kwexesha elifutshane. Ukuqhawulwa kwe-1911.43 kuya kuqhubeka nokuwa ukusuka kwi-2015.66, njengesebe lesithathu lepateni yokudibanisa ukusuka kwi-2075.18 ukuya kwi-1862.55.
I-WTI ngoku ilindele ukuxhathisa kwi-43.38 kulandela ingxelo yezinto zeoyile. Ikhefu elingezantsi liza kuphinda liqhubeke nokuqina kwamandla e-USD / CAD.
Onke Amehlo kwiNtetho yePowell ye-FED ekulindeleke ukuba yenzeke
Abathathi-nxaxheba kwimarike bahlala belumkile imini yonke, bethatha ixesha lokulinda phambi kwentetho yi-US Federal Reserve Chief Powell kwisimpoziyamu eyayiseJackson Hole ngalo Lwesine. Uthethathethwano lwentengiso lubonisa ukuba kunokwenzeka ukuba aphuhlise isakhelo somgaqo-lawulo wemali esisiseko esijolise kumndilili wokujolisa kwixabiso lentengo (AIT).
Idola lilonke lalibuthathaka xa kuthelekiswa nabantu abakhuphisana nabo, ngaphandle kokuyalela izinto ezomeleleyo. Nangona kunjalo, bobabini bahlala ngaphakathi kuluhlu lwabo lokugqibela. I-EUR / i-USD ivaliwe phantse ingatshintshiyo kusuku lwesithathu ngokulandelelana, ibambe ngaphakathi kuluhlu oluchazwe kuLwesihlanu odlulileyo.
tags igolide, UJerome H. Powell, ioyile
I-Yen, iFranc, kunye neoyile ekhutshelwe phezulu ngenxa yokuNgqubana kwezopolitiko kuMbindi Mpuma
Ukuhlaziywa: 3 January 2020
I-yen kunye ne-franc yaseSwitzerland yomelezwe ngokuqinileyo njengoko imarike iyeke umngcipheko wokutya wokuthintela umngcipheko. Ngaphandle kokuphuma okubhalisiweyo kwizitokhwe zase-US, iimarike zaseAsia ziye zabuya ngenxa yengxwabangxwaba entsha yezopolitiko kuMbindi Mpuma. Ixabiso leoyile lenyukile ukongeza kwigolide, ngelixa isivuno sikaNondyebo siwile. Kwiimarike zotshintshiselwano lwangaphandle, iidola zaseOstreliya naseNew Zealand zibuthathaka kakhulu, kodwa i-euro kunye nokugqwesa kuyafana.
Olona phuculo lubalulekileyo kwisithuba esiphakathi yayikukuphula inkxaso yexesha elincinci kwi-USD / JPY. Ukuxhamla kwayo kwi-104.45 ngekwakuphele kwi-109.72 ukuza kuthi ga ngoku. Ukwehla okunye okwangoku kubonakalisiwe kwinqanaba lokuguqula eli-107.70 kuqala, kweli nqanaba 106.48. I-EUR / JPY inokuthi, nangona kunjalo, ijonge ukufikelela kwi-119.99 yenkxaso ebalulekileyo kwikota ekufutshane. Ukuqhekeka kwe-euro ngokuchasene neponti yase-Bhritane (i-EUR / GBP) kwinqanaba elincinci lokuxhasa i-0.8476 izolo yayikukuqhambuka okungeyonyani. Ikhefu le-GBP / JPY kwi-142.42 liqinisekisa ukuba ukubuyela kwimeko yesiqhelo kugqityiwe. I-GBP / i-USD icinezela i-1.3105 kwaye ulwaphulo luya kuseta imeko ngokubanzi ye-GBP / JPY.
Ngokuphathelele iAsia, iJapan ihlala ikwiholide. IHSI yeHong Kong yehle nge-0.17%. I-China Shanghai SSE yawa-0.30%. I-Strait Times yase-Singapore iphantsi kwe-0.52%. Ngethuba eliphakathi, iDow yenyuka nge-1.16%. I-S & P 500 inyuke nge-0.84%. I-Nasdaq inyuke nge-1.33%. Zonke iirekhodi bezizintsha. Isivuno seminyaka eli-10 sawa ngo-0.037 ukuya ku-1.882.
I-EUR / i-USD yandisa iiBhere zayo kwiAkhawunti yoXinzelelo lwezeNdalo
I-EUR / USD yehla phantsi kwe-1.1150 emva kokubulawa yimikhosi yase-US umlawuli ophethe umkhosi waseIran e-Iraq. Isimo sokungabikho komngcipheko sithumela abalindi bezemali kwidola yaseMelika ekhuselekileyo. Ukunyuka kwamaxabiso eJamani kunye nesalathiso seshishini kwicandelo lokuvelisa lase-US kulindeleke.
Isibini semali sasingaphezulu kwe-1.1150, esigqithisiweyo ekuqaleni kuka-Septemba kwaye kungekudala saba lelona nqanaba liphezulu.
Ukuya kuthi ga ngoku, i-1.1130 kunye ne-1.1110 zibambe i-EUR / USD ngoDisemba. Bafikelela kwi-1.1065, ebonelela ngenkxaso kwiKrisimesi.
Ukuqwalasela, i-1.1175 yayiphezulu phakathi koDisemba. Ibaleka kude kube li-1.12, inani elijikelezayo elinikezela ngenkxaso kwiintsuku zokugqibela zika-2019. Ngapha koko, sibona i-1.1220 kunye ne-1.1240, efike phezulu malunga nexesha elinye.
tags YeEUR / USD, Uxinzelelo lwelizwe, ioyile, Swiss Franc, yen